Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya zaseToronto eziya eGrenada kwiAir Canada ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Caribbean • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Abantu baseCanada bazimisele ukuhamba kwaye iGrenada ilindele ukuba kuya kubakho uhambo oluya kumazwe ngamazwe ngexesha lasebusika, ngakumbi kwiindawo ezishushu zemozulu.
IGrenada iyakwamkela ukubuyiswa kwenkonzo yomoya evela eCanada okokuqala enyakeni.
Ngo-2019, iGrenada yamkele iindwendwe zaseCanada eziyi-17,911.
I-Travelbrands yi-Canadian ephethwe kwaye isebenza "i-super distribution" inethiwekhi equlethwe ziimpawu ezintlanu zokuthengisa / i-intanethi ye-arhente yokuhamba kunye ne-10 ye-tour operator ye-wholesale brands.
NgeCawa, nge-31 ka-Okthobha, Grenada yamkela ukubuyiswa kwenkonzo yomoya evela eCanada okokuqala enyakeni. Indiza yase-Air Canada i-1066, i-Boeing 737 Max 8, yafika phantsi ngo-2:55 PM. UCaptain John Petropoulos kunye nabakhweli abali-169 bamkelwe ngokufudumeleyo yiCEO yeGrenada Tourism Authority (GTA) uPetra Roach, aBaphathi beNtengiso uRenee Goodwin kunye noShanai St Bernard kunye nesingqi esikhalayo somculo wentsimbi. Umqhubi wenqwelomoya kunye nabasebenzi banikwe incwadi entle yetafile yekofu, iGrenada Heritage "Uhambo Lomfanekiso ngeNdawo kunye nexesha" kunye nokukhethwa kweetshokholethi ezenziwe ekuhlaleni. Abakhweli babenesiphiwo seebhegi ze tote eziquka ingqokelela yeempahla zokwenyani zaseGrenadi.
Ukuvuselela imfuno yeenqwelomoya kabini ngeveki ukusuka eToronto, ngeeCawe nangoLwesithathu, i-GTA iqalise iphulo lokuthengisa elinobundlongondlongo lisebenzisa amaqhinga eendaba zemveli, zedijithali kunye nezentlalo kwimarike yaseCanada. Air Canada kunye ne-travel syndicate, TravelBrands.
The Air Canada iphulo liya kubandakanya, kodwa lingaphelelanga apho, ukusebenza kwedijithali kwiphepha labo le-Facebook kunye neNethiwekhi yeMozulu kunye nekhredithi yeekhilomitha ezingama-5,000 ze-Aeroplan kumkhweli ngamnye obhukisha indawo ekuyiwa kuyo ngexesha lephulo leeveki ezintathu.
I-Travelbrands yi-Canadian ephethwe kwaye isebenza "i-super distribution" inethiwekhi equlethwe ziimpawu ezintlanu zokuthengisa / i-intanethi ye-arhente yokuhamba kunye ne-10 ye-tour operator ye-wholesale brands. I-Sunquest, i-Exotik Tours, i-Holiday House, kunye nezinye iimpawu ezifana ne-FunSun Vacations, i-Boomerang Tours, i-RedTag.ca kunye ne-ALBATours zonke zikhona phantsi kwe-ambulera enye, okwenza i-TravelBrands ibe yindawo yamandla kwishishini lokuhamba laseCanada.
Iphulo labo liya kubandakanya ukuthathwa kwephepha lasekhaya leeveki ezimbini leRedtag.ca, Izaziso zeDeal Alert, iintengiso zebhena kunye nezithuba zevidiyo. Iiarhente zokuhamba ezibhukisha iiholide ukuya eGrenada ziya kufumana amaxesha angama-5 amanqaku aqhelekileyo okunyaniseka ngexesha lephulo.
I-CEO ye-GTA, uPetra Roach uphawule wathi, “Abantu baseKhanada bazimisele ukukhenketha kwaye silindele ukuba kuya kubakho ukunyuka kohambo lwamazwe ngamazwe ngexesha lasebusika, ngakumbi kwiindawo ezishushu zemozulu. Ke ngoko kufuneka sibonakale kwindawo yentengiso ukuze sisebenzise eli thuba lifunekayo kunye nesikhundla Grenada njengeyona ndawo ifanelekileyo yokuya kubantu baseCanada abafuna ukubaleka kumaqondo obushushu abandayo baye eholideyini kwindawo yokwenyani.”
Ngo-2019, iGrenada yamkele abantu baseCanada abayi-17,911 bebonke.